ချက်ပြုတ်နည်းများ | Wutyee Food House
မြန်မာပြည်တွင် လူကြိုက်များတဲ့ ချက်နည်းများ
ကြက်သား နှင့် မျှစ်ကြော်ဟင်း
ဘဲကင် နှင့် တရုတ်စတိုင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်
စီချွမ့်စတိုင် ၀က်သား တို့ဟူးအစပ်ဟင်း
ကညွတ်၊ ဟမ်ကြော် (Ham and Asparagus Roll)
တရုတ်စတိုင် ၀က်သား တို့ဟူးဟင်း
ပါစတာနှင့် တူနာ ဆလတ်သုတ်
ပြည်ကြီးငါး နှင့် ခရုဆီ
Martarbak ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲကြော်
အခြေခံပီဇာဒိုး လုပ်နည်းနှင့် ပီဇာ ဆော့လုပ်နည်း
ဟမ်၊ ချိစ် ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကြော်
၀က်သားကင် နှင့် အာလူးထောင်း
Valentine Day အမဲသားကင်
ရောင်စုံ ဂျယ်လီ နဲ့ Whipped ခရင်မ်
Crepe Cake (အထပ်နှစ်ဆယ်ကိတ်)
ကြက်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆာဆာ ဘာဂါ
Subway အမဲသားလုံး ဆမ်းဝေ့
အမဲသား၊ ချိစ် ဘာဂါ
ကိုရီးယား ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကင်ချီ ထမင်းကြော် (ဘိုကမ်ဘတ်)
လာအို ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
Ma wai is welcome! 🙂
Phoe Zin says:
အစ်မကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
ကျွန်တော်က ထမင်းဟင်းချက်ရတာကို အရမ်းဝါသနာပါတယ်ဗျ . . .
အစ်မလို ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ပညာကို အများသူငါကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်…
နောက်လည်းဖြစ်နိုင်ရင် အစားအသောက်အသစ်အဆန်းလေးတွေတင်ရင် ကျွန်တော်ကိုလည်း ပို့ပေးပါဦးနော် . . .
များများမျှဝေပေးနိုင်ပါစေလို့ အစ်မကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် . . .
Phoe Zin ရေ ကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ အစားအသောက် အသစ်တင်တိုင်း သိနိုင်အောင် email subscription လုပ်သွားပါအုန်းနော်။ ၀တ်ရည်လည်း အတတ်နိုင်အောင် ဟင်းအသစ်အဆန်းတွေကို တင်သွားပေးပါမယ်.. 🙂
ကျောက်ကျောကိုအထူးအဆန်းလေးလုပ်ချင်တယ် Sun အလှူမှာကျွေးဖို့
၀က်အူချောင်း လုပ်နည်း သိချင်ပါတယ်၊တင်ပေးမယ်လို.မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဟီးဟီး.. ၀က်အူချောင်းတော့ မလုပ်တတ်ဘူး။ ၀ယ်ပဲ စားတတ်တာ… 🙂
မုန့်ကျွဲသဲလုပ်နည်းလေး သိချင်လို့လေ…..တင်ပေးနိုင် မရ်လို့မျှော်လင့်ပါတရ်..ကျေးဇူးပါပဲ..
ဟုတ်ကဲ့.. ၀တ်ရည်တော့ မလုပ်ဖူးပေမယ့် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါမယ်.. 🙂
ရေခဲမုန့် လုပ်နည်း သိချင်လို့ပါ…
အစ်မ . . .
ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ အစ်မရဲ့ဆိုဒ်ကို မ၀င်ဖြစ်ဘူးဗျ . . .
ကျွန်တော်ကို ဟင်းအသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
Email Subscription လည်းလုပ်ထားပါတယ် . . .
နောက်ထပ်ပိုသေချာအောင်လို့ ဒီမေးလေးနဲ့လည်း ပို့ပေးပါဦးနော်
တကယ်လို့အစ်မရဲ့လက်ရာကိုအပြင်မှာစားခွင့်ကြုံရင် စားလိုက်ချင်သေးသဗျာ ……
Phoe Zin ရေ အီးမေး subscription လုပ်ထားရင် ဟင်းသစ်တင်တိုင်း auto ပို့ပေးပါတယ်။ အားရင်လည်း ဟင်းတွေ ချက်စားကြည့်ပါနော်..:)
ကျွန်တော်က Israel က ပါ။ အမရဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ၊ မုန့် လုပ် နည်းတွေ ကို ဖတ်ခွင့်ရ တဲ့ အတွက် အမကိုကျေးဇူးအများကြီတင်ပါတယ်။ မပင်ပန်းဘူးဆိုရင် အီကြာကွေး လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါဦး။ တအားစားချင်နေလို့ ပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ email က uooswar@gmail.com ပါ။
UooSwar ရေ အီကြာကွေးလုပ်နည်း ရော၊ လုပ်ပုံပါ တစ်ကွ နောက် တစ်ပတ်ထဲ တင်ပေးပါမယ်… တင်ပြီးရင်လည်း အီးမေးနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်.. 🙂
ကျွန်တော် လည်းဘဲ အီကြာ ကွေး ဂျုံ လုပ်နည်း လေးသိချင်တယ်ဗျ.ကျွှန်တော်အခု ဒူဘိုင်ကို ရောက်နေတော့ညီမရဲ့ blog က တကယ်ကို အများကြီး အထောက် အကူပြုတယ်.Star Resources ကျောင်းထွက်ထဲ မှာ ညီမတစ်ယောက်ဘဲ ချက်နည်းပြုတ်နည်း blog ကို ကောင်းကောင်း နဲ့သပ်သပ် ရပ်ရပ်လုပ်နိုင်တာတွေ့ ရတယ်….တကယ်ကို လေးစာပါတယ်…….
ကျေးဇူးးအများကြီးတင်ပါတယ် အမရေ ။ စောင့် ပြီးတော့ ကို လုပ်စားပြစ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ ဂျုံ (၂) ကီလိုလောက် ဟဲဟဲ…..
I also want to know how to make Ei Kyar Kwee. Tks.
အမ ချက်တဲ့ ဟင်းနည်းလေးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် အခုတလော ကာဆင်ဘိုင် ကြက်သားသုပ် သုပ်စားချင်စိတ်ပေါ်နေလို့ နည်းလေးသိရင် မျှဝေပါအုန်းနော်
ပန်းအိရေ၊ ကာဆင်ဘိုင် ကြက်သားသုပ် ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ မသိဘူး.. ၀တ်ရည် မကြားဖူးလို့ပါ.. 🙂
ပဲငပိတ်တော့ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး.. လုပ်ဖြစ်ရင် ချက်နည်း တင်ပေးပါ့မယ်..
ွှThanks Ma Mee!:)
u r requested to launch pork leg soup if possible, thanks
၀က်ခြေထောက် စွတ်ပြုတ် တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်… 🙂
when can i c my requested “pork leg soup” menu?
Ko Ko aung ရေ ဆော်ရီးနော်.. ခုမှပဲ ၀က်ခြေထောက်စွတ်ပြုတ် ချက်နည်းကို တင်ပေးနိုင်လို့ပါ… ချက်နည်းကို http://getacookrecipe.wordpress.com/2010/12/06/၀က်ခြေထောက်စွတ်ပြုတ်/ ရေးပေးထားတယ်နော်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်
may kyin says:
တော် လိုက် တာ
ကျေး ဇူး ပါ
ဒီနေ့ ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းစွပ်ပူချက်သောက်တယ်။ ထင်ထားတာထက် ပိုကောင်းတယ်ဝတ်ရည်ရယ်။ အုန်းနို့တော့မထည့်လိုက်ဘူး။ ချဉ်စပ်မဖြစ်ဘဲချိုသွားမှာစိုးရိမ်လို့လေ။ အုန်းနို့ထည့်ရင် အရသာက ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ တော်ကြာမကြိုက်ကြရင် ဘယ်သူမှမစားမှာစိုးလို့။ အခုတော့ အားလုံးကကြိုက်ကြတယ်။ ကြက်ခြေထောက်ကိုက်ရင်း ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။ ဒီဆိုက်လေးက စံကို နေ့တိုင်းထမင်းစားမိန်စေတဲ့အတွက် ထမင်းစားတိုင်း ၀တ်ရည်ကို သတိရနေမှာပါ။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နော်။
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် စံစံရေ…. အမြဲတမ်း ထမင်းမြိန်နဲ့ နေ့လေးများ ဖြစ်ပါစေ… 🙂
အစ်မရေ….ကျွန်တော်တစ်ခုသိချင်လို့ …ပဲပြုတ် ပြုတ်နည်းဘဲ
ဘာ ပဲကို ပြုတ်ရတာလဲ….အဲဒီပဲ ရဲ့ english ခေါ်အဝေါ်ကရော
ဘာလဲ သိချင်လို့ ပါ…ကျွန်တော် ဒူဘိုင်းမှာ မြန်မာ ပဲပြုတ်စားချင်လို့ 
စားတော်ပဲ ကိုဒီမှာတော့ indianဆိုင်တွေမှာ vatana လို့မေးပြီးဝယ်ရင်ရတယ်။(သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြတာ။) yellow peas လို့လည်းခေါ်တယ်။
ပဲပြုတ်ပြုတ်ဖို့ကတော့ အချိန်၃ ရက်လောက်ယူရပါတယ်။
၁. yellow pea ကို ၁ ရက်လောက်ရေစိမ်ထားပါ။
၂. ရေစစ်ပြီး နာရီဝက်လောက်လေသလပ်ခံပါ။
၃. သန့်တဲ့အဝတ်နဲ့ ထုပ်ပါ ။ (မှတ်ချက်။ အရမ်းကြပ်နေအောင်မထုပ်ပါနဲ့)
၄. ပြီးနောက် နေရောင်လုံတဲ့နေရာမှာ ၂ ရက်လောက်ထားပါ။
(၂) ရက်ပြီးလို့ထုပ်ကြည့်ရင် ပဲမှာအညှောင့်ကလေးတွေထွက်လာတာတွေ့ပါမယ်။
၅. ပြီးရင် ပဲကို ဆားအနည်းငယ်ဖြူး ၊ ဆိုဒါမှုန့် အနည်းငယ်ရောပြီး အိုးနဲ့ပြုတ်ရပါမယ်။
ဆိုဒါမှုန့်ပမာဏက — yellow pea (500g) ဆိုရင်လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဝက်လောက်ပဲထည့်ရပါမယ် ။
pressure cooker နဲ့ပြုတ်ရင် ၃၀-၄၀ မိနစ်လောက်ထားပြုတ်ပါ။
rice cooker နဲ့လဲ ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းမွှေပေးရပါမယ်။
How much water should i add for “telephone brand, agar agar powder”? Thanks alot for u reply.
Victoria ရေ Telephone brand agar အထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို ရေ ၃လီတာလောက် ထည့်ရပါမယ်။ ရေ၁လီတာ = ရေသန့်ဗူး ၁ဗူးစာ.. 😀
မ၀တ်ရည်….ဒင်းဆမ်းလုပ်နည်းလေး ရှိယင် မျှပါအုံး…
ဒင်းဆမ်း အိမ်မှာ လုပ်စားချင်လို့ပါ…
၀တ်ရည်လုပ်ထားတဲ့ ဒင်းဆမ်း လုပ်နည်းတွေပါ
ဟင်းတွေစုံလွန်းလို့ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းကိုမသိဘူး တော်တော်ကို တော်တဲ့ blog ပိုင်ရှင်လေးပါ ပဲ
ဖြိုးတော့ မြှောက်ပြောနေပြန်ပြီ.. ကျေဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေ အားလုံး အ၀စားသွားနော်.. 🙂
cherry ba htay says:
ah yan kyite par tel.
Thanks par.. 😀
မ၀တ်ရည်ရေ ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ မြီးရှည်လုပ်နည်းလေးသိရင် ပြောပြပေးပါနော်။ ကျေးဇူးအထူး
ဝေရေ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းလေးတော့ တင်ထားပေးတယ်… http://getacookrecipe.wordpress.com/2010/06/14/ရှမ်းခေါက်ဆွဲ
Pls share me how to cook crab for myanmar taste.
၀တ်ရည်ခုတစ်လော အရမ်းအလုပ်များနေလို့ ခုမှ စာပြန်ဖြစ်တာပါ။ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်
ဟုတ်ကဲ့ ဒီတပတ်အတွင်း ပြန်ဖြေပါ့မယ်နော်… 😀
hi ah ma wutyee,
where can i find အီကြာကွေး receipe?
မဒီက ထမင်းဟင်းချက်ရတာကို အရမ်းဝါသနာပါ ပါတယ် . . .
အစ်မတတ်ထားတဲ့ပညာကို အများသူငါကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်…
နောက်လည်းဖြစ်နိုင်ရင် အစားအသောက်အသစ်အဆန်းလေးတွေတင်ရင် မဒီ့့ကိုလည်း ပို့ပေးပါဦးနော် . . .
မယ်မဒီကိုလည်း အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… 😀
Ah Ma yal
Kyaw su pyu pi ” hta ma nel htoo nee ” lay lal tin par ohn naw.
Thank you par bal.
ဟုတ်ကဲ့ ထမနဲထိုးနည်း တင်ပေးပါမယ်..
မချို တင်ပေးထာတဲ့နည်း အတိုင်း ၀က်သားတုတ်ထိုး လုပ်စား ပါတယ်၊၊
(ကျွန်တော့်အတွက်) စားဖူး သမျှ ၀က်သားတုတ်ထိုးတွေ ထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။
ပါပလာကြော် အရွက် လုပ်နည်းလေးသိရင် တင်ပေးပါဦးဗျာ၊နော်…
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။။ ကျေးဇူးပါ
အမဝတ်ရည်ရဲ့ဟင်းတွေကြည့်ပြီး ချက်ကျွေးတာ ကြိုက်ကျလို့ အမကိုကျေးဇူးအ၇မ်းတင်ပါတယ် ..ညီမက အိမ်မှာစားဖိုမှူးတာဝန်ယူထား၇လို့ ညီမလေးကဟင်းချက်တာအစကကောင်းဘူးအခုမဝတ်ရည်ကျေးဇူးကြောင့် ဟင်းချက်လက်ရာ ကောင်းလာလို့အမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိမ်က အဖိုးအဖွားတွေကတောင်ချီးကျူးနေပြီ အဟီး… ငါးသလောက်ပေါင်းနည်းလေးလဲတင်ပေးပါလားအမရေ …အမရဲ့ ပညာတွေကိုအ၇မ်းလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်
နှင်းလေး ရေ ၀တ်ရည်ဟင်းတွေ ချက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်…. ငါးသလောက်ပေါင်း ချက်နည်းလေး နောက်ကျတင်ပေးပါ့မယ်နော်.. 😀
Can I ask how to cook coconut noodle??
Let me share all the recipes…
အုန်းထမင်း ချက်နည်း http://getacookrecipe.wordpress.com/2011/04/19/အုန်းထမင်းနှင့်-ကြက်သား/ မှာတင်ပေးထားပါတယ်.. 😀
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ ခုထိ မတင်ဖြစ်သေးလို့.. 🙂
ကြေးအိုးဆီချက် လုပ်နည်းကို http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=4696/ ကိုကြေးအိုးလုပ်နည်း အောက်နားမှာ ရေးပေးထားပါတယ်
အစားအစာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်ရပြီး စားကောင်းတာကို ပိုကြိုက်တယ်အမ
ဟင်းချက်ခါနီးရင် ဟင်းအမယ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတဲ့ဟာဆို အဆင်ပြေတယ်
ညီမက လုပ်စားဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ဖြစ် အမတင်သမျှ ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့အကုန်လုံးကို print ထုတ်ပြီး စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားတက်တယ် ဟင်းချက်နည်းသင်တန်းတက်ချင်တာ အချိန်မရလို့လေ အမဟင်းချက်နည်းတွေတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
သရေစာပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးထဲက ကောင်းမယ်ထင်တာလေးလဲတင်ပေးနော်
အမရေ ကိုရီးယားကြက်အူချောင်းတို့ ဘာတို့ကို ကင်ရင် အပူဘယ်လောက်နဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ထားရမလဲဟင် ပြောပြပေးပါအုံးနော်
၀တ်ရည် ကင်နေကျတော့ ကင်ပြားကို ဆီအနည်းငယ် အရင် သုတ်ပေးပါ။ ပြီမှ ကြက်အူချောင်းကို ကင်ပြားပေါ်တင်ပြီး မီးအသင့်တင့်နဲ့ ကျက်သည်အထိ တဖက်စီလှန်ပြီ ကင်လိုက်ရုံပါပဲ။ အချိန်က ၂မိနစ်လောက်ဆို ရပါပြီ ဟန်လေး.. 🙂
ကျေးဇူးပါအမ အပူချိန်ကို ဘယ်လောက်ထားရမလဲ ဖြေပေးပါအုံးနော်
အမ ဟင်းချက်နည်းWebsite က မြန်မာချစ်သူမိသားစုအပြင် ဘာရှိသေးမလဲမသိဘူးနော်
ညီမက အဲ့လိုဟင်းချက်နည်းကို ၀င်ကြည့်ရတာဝါသနာပါလို့လေ သိတာကလည်းဒီ2ခုပဲ
ှရှိလို့ ကျေးဇူးပြုပြီးအမသိရင်လည်း ပြောပြပေးပါနော် အမwebsite ကိုတော့ပိုအားပေးတာပေါ့နော်
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည်သိတဲ့ တခြားဟင်းချက်ဘလောက်တွေက
တွေပါ။ မလုလုဟင်းချက်ဘလောက်ကတော့ ဟင်းတွေ တော်တော်စုံတာမို့ ဟန်လေး သဘောကျပါလိမ့်မယ်.. ကျေးဇူး.. 🙂
ညီမက 0ven နဲ့ ကင်မှာမလို့ပါအမ အပူချိန်ကို ဘယ်လောက်ထားရမလဲလို့ ဖြေပေးပါအုံးနော်
0ven နဲ့ကင်ရင် ၀တ်ရည် အချိန်တိုတိုနဲ့ မြန်မြန်ကျက်ချင်ရင် ၀တ်ရည် ပုံမှန် ၂၀၀ဒီဂရီလောက်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အထဲက အသားတွေပါ ပိုနူးစေချင်ရင် ၁၈၀နဲ့ ကြာကြာကင်ပေးပါ… 🙂
Could I know how to make yoghurt at home easily?
ရိုးရိုး နွားနို့ကျိုပြီ ခပ်နွေးနွေးမှာ ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်းလောက် ထည့်လိုက်ရင် ဒိန်ချဉ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..
အမ၀က်ဆိုက်ဒ် က အကောင်းဆုံးပဲအမ တခြားတွေကိုဝင်ကြည့်ပြီးပြီ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ဟင်းချက်နည်းကနည်းနည်း စကားတွေကများများ ဆိုင်ကဓါတ်ပုံတွေပဲတင်ထားတာ
ကျေးဇူးပါ.. ဟီးဟီး မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်…
ဟန်လေးရေ ယိုးဒယား တုံယမ်းဟင်းချိုလုပ်နည်းတော့ တင်ထားတယ်။ တခြား ဟင်းချိုတွေလည်း တင်ပေးပါ့မယ်.. 😀 http://getacookrecipe.wordpress.com/2010/10/12/ကြက်ခြေထောက်-တုံယမ်းဟင်/
de lo recipe ko share deatwat Ma Wut Yee ko kyay zuamyar gyi tin par dal..
I have been very much interested in cooking. And could I faithfully request to have Mar Lar Hinn recipe please (a Sijuan Chinese food that have been popular in Ygn roadside shops) cos I love it so much. I think, there are lots of people keen to learn it too..
Zeta ရေ မာလာဟင်း ၀တ်ရည်လည်း ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည် အမြဲလုပ်စားဖြစ်တာတော့ မာလာဟင်း Ready Made ထုပ်ဝယ်ပြီ ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ၊ အသားလုံးတွေထည့်ပြီ ချက်စားတာပါ။ ချက်နည်း အတိအကျတော့ သိဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှာဖွေပြီ ပြန်ပြောပေးပါ့မယ်။ အမြဲအားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ..:P
အချိုးအစားတွေတိတိကျကျထည့်ပေးထားတော့ လုပ်၇တာလွယ်တာပေါ့ နော်။ဖတ်ခွင့်၇တာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ပို့ ပေးတဲ့ ညီမလေးကိုေ၇ာပေါ့ 
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ ကျေးဇူးးပါနော်.. 😛
အစ်မကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အခုလိုမျိုးဟင်းချက်နည်းတွေသိခွင့်ရတဲ့အတွက် နောင်လည်းများများတင်နိုင်ပြီး ဒီ့ထက်မကအောင်မြင်ပါစေနော်…
ah ma yae chat nee tway ko kyi tar nae tin bite sar lar p!!!!
ke chat kway toh naw!!!
lar sar mae!!!!
heee ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးကို တကယ်ချက်ကျွေးချင်တာပါ… လာစားနော်.. 🙂
တော်လိုက်တာ ၀တ်ရည်ရယ်.. ချက်ပြုတ်နည်းလေးတွေရော..ချက်ပြီးတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရော အားလုံးဂွတ်ရှယ်ဘဲ
စင်ဒီလဲ အစားကောင်းစားချင်တိုင်း ဒီကိုဘဲ လာလာပြီး သွားရည်ကျနေရတယ်
မမဝတ်ရည် ရေ…ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်း လုပ်နည်းလေးလည်း သိရင် တင်ပေးပါဦးနော်..ကျေးဇူးပါ..
နောက်ကျ ၀တ်ရည် တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
ချက်ပြုတ်နည်းတွေကို ဖတ်ရတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်
ထပ်ပီးတော့ ဆနွန်းမကင်းဖုတ်နည်းလေးလည်း တင်ပြပေးပါအုံး ။
ဟီးဟီး ဆနွင်းမကင်း ဖုတ်နည်းလေး ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တခါမှ မလုပ်စားဖူးဘူး။ ဒါနဲ့ ၀တ်မှုံဟုတ်ဖူးနော်၊ ၀တ်ရည်။ ၀တ်ရည်အမွှာညီမ နံမည်ကမှ ၀တ်မှုံ။ ဒါပေမယ့် တူတူပါပဲ.. Thank you too.. 😀
အီကြာကွေးလုပ်နည်းရှာလို့မတွေ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ …
လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါအုံး …
Sorry ဗျာ… လောသွားလို့ 
ဟီးဟီး ရှာလို့ တွေ့ သွားပြီ …
Thwe Sin says:
မြန်မာဟင်းလေးတွေပိုပြီးစုံစုံလေးတင်စေချင်ပါတယ်အမ .. ဒါဆိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော် .. မြန်မာတွေနေ့စဉ်စားသုံးချက်နေကြဟာလေးတွေ .. ခရမ်းသီးနှပ် .. ပဲဟင်း တို့လိုပေါ့ .. Whatever .. Thx for this blog ..
ok sis I will try to post Myanmar Recipe also! 🙂
အိမ်မှာ ဒီ Blog ကြည့်ကတည်းက ပာင်းမထပ်တော ၀ူး 🙂
Dear Ma Wutyee… if you don’t mind kindly share us how to do the Hot Pop..Thanking you in advance !!!
ok I will post Hot pot recipe soon. Thanks 🙂
ပဲကြော်သုတ် နည်းလေးရှိရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မီးမီးရေ ပဲကြော်သုတ်က ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၂ထောင်း လှီးထည့်၊ ဆီနည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်း ထည့်သုတ်ရုံပါပဲ.. 🙂
ကျွန်တော်ကတော့ ကြာ့ညို့လေးကါ ထညိ့သုပ်လိုက်မှ အရသာပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်ဗျ။
ဆနွင်းမကင်းလုပ်စားချင်လို့ ဆနွင်းမကင်းလုပ်နည်းလေးကြုံ ရင်ရေးပေးပါနော်။
I will post sis! 🙂
ဒီ site ကိုကြည့်ပြီးကတည်းက အရင်ကလိုလျှောက်လျှောက်ရမ်းမချက်ရတော့ဘူး
အရင်တုန်း ဟင်းချက်လည်းဝါသနာပါ မလုပ်ကလည်းမလုပ်တတ်ဆိုတော့ ဟိဟိ
ပြီးတော့ အစ်မရေ ဟင်းအမည် အချိုးအစားတွေကို ဂရမ်အပြင် တခြားအချိန်အတွယ်လေးတွေနဲ့ပါတွဲတင်ပေးပါလားနော်။
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ပိုင်းဟင်းတွေကို ကြိုးစားပြီ အချိန်အတွယ်များများနဲ့ ပူးတွဲ ရေးပေးပါ့မယ် ညီမရေ… အားပေးတယ်ဆိုလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း အထူးကျေးဇူး.. 🙂
အစ်မ ကျွန်တော့်ကို ကြက်ဥပူတင်း ပြုလုပ်ပုံလေး တင်ပေးပါအုံးနော် ။ ကျွန်တော် ကြက်ဥပူတင်း လုပ်တာ ဆိုင်တွေမှာ စားသလို မမာလို့ ပါနော်။ ကျေးဇူးပါ။
ok I will bro.. Thanks 🙂
sis အရမ်းတော်တာပဲနော် လေးစားပါတယ် 🙂 အမြဲတမ်းလဲ အားပေးနေမယ်နော် … 🙂 ဟင်းချက်နည်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊
Thanks also par naw! 🙂
Pan Su Min Lwin says:
Ma ma, thank u so so much !!! You are so kind and good heart owner … Thanks for all ur precious ways of cooking!
ွှThanksalot sis yay! 🙂
Ma Ma can u post how to make delicious sauces? Thank U!
ok I will sis.. thanks you also par sis ya! 😛
တခါမှ မစားဖူးဘူး.. ကြည့်ရတာ အချိုမုန့်ထင်တယ်.. 🙂
Ma Suu says:
Hnin Wutt Yie says:
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ ညီမရေ.. 🙂
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အစ်မက ဟင်းချက်ဝါသနာပါတဲ့သူပါ။ ၀တ်ရည် ရဲ့ဟင်းချက်နည်း တွေ ကူးသွားပါတယ် ။ မိသားစုတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးရတဲ့အခါ အများကြီးအထောက်အကူရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
၀တ်ရည်ကလည်း အမြဲအားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်ပါနော်…
Thanks also 😀
ဦးက အသက်ကြီးပါပြီ ဟင်းချက်နည်းတွေပေးတာ အသက်ရှည်ဆေး ခွန်အားဗလအားဆေး ရုပ်လှဆေး ကျန်းမာဆေးတွေပေးတာနှင့်အတူတူမို့ သမီးလည်းထပ်တူရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဦးလှထွန်း
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ.. ကျေးဇူးပါ
အမဲသားချက်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်.. Thanks 🙂
Ma Thandar says:
မနေ့က (29 Apr 2012) Sunday ဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက်မှာ ဒန်ပေါက် ချက်စားဖြစ်တယ်၊ အမ အမျိုးသားနဲ့ သမီးက ကြိုက်တယ်တဲ့
ဟုတ်လား မသန္တာ။ ခုလို အားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူး။ ၀တ်ရည်လည်း အဲဒီဒန်ပေါက်ကို အရမ်းသဘောကျတယ်၊ လုပ်ရလည်း လွယ်လို့လေ.
အမက အချက်အပြုတ် ၀ါသနာပါတဲ့ အိမ်ရှင်မ ဆိုတော့ ၀တ်ရည်ကြောင့် ဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ကို မရိုးရအောင် မိသားစုကိုချက်ကြွေးရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ။ အမြဲအားပေးနေမယ်နော်၊
Thanks also Ma Thandar! 🙂
နောက်တစ်ခါ ရုံးပိတ်ရက် မှာ ယိုးဒယား ငါးဖယ်ကြော် လုပ်စားမယ် ။
၀တ်ရည်ကိုလည်း အမ လက်ရာလေး ပေးစားချင်ပါတယ် တကယ်ပြောတာပါ ။ ၀တ်ရည်ရဲ့ ဆိုက်ဒ် ကို သိတာ မကြာသေးဘူး အသိ နောက်ကျလိုက်တာ။ အမ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း Share လုပ်ပေးထားတယ်
share ပေးထားတယ်ဆိုလို့ အထူးကျေးဇူးမ။ 🙂
ညီမ၀တ်ရည် ဆန်တို့ဖူးလုပ်နည်းလေးဖတ်ခဲ့ဘူးလားလို့ ပြန်ရှာတာမတွေ့ဘူး။ သိရင်ဝေမျှပေးပါအုံး။
တို့ဟူးလုပ်နည်းလေးကို http://getacookrecipe.wordpress.com/2010/11/08/တို့ဟူးသုပ်လေး-လုပ်စာြး/ မှာရေးထားပါတယ်.. 🙂
အနောက်တိုင်းအစားအစာ rib eye လုပ်နည်းလေးသိရင်တင်ပြပေးပါအုံး…
sorry sis, I don’t know!
ချက်ပြုတ်နည်းလေးကိုကြိုက်ပါတယ်…………ဒါပေမယ်လေ….အဲဒါလေးတွေကို ကျွန်တော် PDF နဲ့ Download လုပ်လို့ရအောင် တင်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်…ခင်ဗျာ
နောက်ပိုင်းကျရင် ကြိုးစားလုပ်ပေးပါ့မယ်။ ခုတော့ ၀က်ဆိုက်အသစ်ပြောင်းနေတာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ။ အားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ
Thanks for all recipes. Since I am away from Yangon for 10 years, I missed all Burmese snacks and Food, especially pae pyat and yae moke.
I am latphat lover and even thought I can stock latphat, I am always run out of a-kyaw-sone. If you know how to make a-kyaw-sone, can you post here. Thanksabunch.
အစုံကြော်တော့ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတော့ မလုပ်စားဖြစ်ဘူး။ လုပ်စားဖြစ်တာနဲ့ ချက်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်
အမ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အမတင်ပေးတဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ အမြဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်… အမက အရမ်းတော်တယ်နော်….. အမရဲ့ ချက်နည်းတွေ ချည်းပဲ သတ်သတ် ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်မျိုး ၇ှိလား သိချင်ပါတယ် နော်…. အားလုံး Print ထုတ်ထားဖို့ မလွယ်လို့ပါ…
ဟုတ်ကဲ့ ညီမရေ။ ဒီဇင်ဘာလလောက် ဟင်းချက်စာအုပ်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ဟင်းချက်နည်း ၁၀၀ကျော်လောက် ပါမယ်။ ထုတ်ပြီတာနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်မယ်နော်။ အားပေးမယ်ဆိုလို့ အထူးကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
ကြေးအိုးလုပ်နည်း မတင်ရသေးဘူး။ ဟုတ် တင်ပေးပါ့မယ်၊ အမြန်ဆုံး။ Thanks
I will post later sis
pa zon chaut htaing kyaw
kyaw nee lay pyaw pya pay par lar ama.
ok I will post later sis 😀
မ၀တ်ရည် ၊ကျေးဇူးပြုရ်ျ ရေခဲမှုန်.(ice cream) လုပ်နည်းလေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။စီးပွားပြစ်အများကြီးလုပ်နည်းမဟုတ်ပါ။အိမ်မှာနည်းနည်းနဲ.ကောင်းကောင်းလုပ်စားနည်းလေးလိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော် 🙂
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်။ 😀
အမရေ ကြေအိုးနဲ့ ကြေအိုးဆီချက်လေးshare ပါအုန်း
ဟုတ်ကဲ့။ ၀တ်ရည်လည်း တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကြိုးစားပြီ နောက်အပတ်ထဲ တင်ပေးပါ့မယ်နော်
လာလည်သွားပါတယ်မဝတ်ရည် ။ အခုလိုချက်ပြုတ်နည်းများစွာကိုတွေ့ရတာ အံ့မခန်းပါပဲဗျာ ။
ခုလို လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါနော်.. နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း.. 😀
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ် 🙂
ဝတ်ရည်ရေအမ အပြင်မှာရောင်းနွှေုတဲ့ ငါးကာင်လိုက်ကင်လိုမျိုးကင်ကြည့်ချင်လို့ရှာတာမတွေ့ဘူး
မဝတ်ရည်ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချက်နည်းတွေလည်း ယူသွားတယ်နော်
You r very welcome sis!
သမီးရေ အဘကသွေးတိုးရှိတယ် ဘဲဥဆားစိမ်ဝယ်စားရင်အရမ်းငံနေလို့အိမ်မှာလုပ်စားချင်လို့
ဟုတ်ကဲ့။ ဘဲဥဆားစိမ်လုပ်နည်း ဒီမှာပါ အဘ။
၁။ ဆား(၂၅ ကျပ်သား)ကို ရေ(၂လီတာ)ဖြင့် တည်ထားပြီ ဆားအရည်ပျော်လျှင် အအေးခံပါ။
၂။ ပြီမှ ဘဲ(၁၀လုံး)ကို သန့်စင်ထားသော မြေအိုး(သို့) မြေခွက်ထဲ ထည့်၊ ဆားရည်ကို ဘဲဥမြုပ်သည်အထိ လောင်းထည့်ပါ။
၃။ ၁၀-၁၄ရက်ထိ စိမ်ထားပြီလျှင် ဘဲဥဆားစိမ်ကို သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ…
ဟုတ်ကဲ့ အားပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်…
မ…အမဲသားချက်နည်းလေးတွေလဲshareပါအုံးနော်…ကျေးဇူးပါနော် မ 🙂
I read your recipes every time before I cook.
Can I request you to tell me how to make “ခေါက်ဆွဲကြွတ်ကြော်”?
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစား ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါ့မယ်. 🙂
thank you so much for your posts.. i can cook very well because of you.
really appreciate your kind contribution.
You r so welcome sis!
Aye Sandar Myint says:
Please teach me how to make hot pot
ဟုတ်ကဲ့။ ဟော့ပေါ့လုပ်နည်း သိချင်တဲ့သူတွေ များလာပြီ။ ရှေ့အပတ်လောက် ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်
၀က်အူချောင်း၊ ငရုတ်ဆီ လုပ်နည်းလေးတွေ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
၀က်အူချောင်းတော့ ၀ယ်ပဲ စားတယ်၊ လုပ်တတ်ဘူး။ ငရုတ်ဆီလုပ်နည်းလေး ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်… 🙂
ဒီ ဆိုက်ဒ် ကို ခုမှ ဖတ်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်…တကယ်တော်ပါတယ်…..မ၀တ်ရည်….
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ။ နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း.. 🙂
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေ…. နောက်ဆို သိချင်တာရှိတိုင်း ဒီကိုပဲပြေးလာရတော့မယ်….ပုံလေးတွေလည်းအရမ်းလှပီး….ရေးထားတာလေးလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်နော်…. Bookmarks မှတ်ထားလိုက်ပါပီနော်….
ဂျပန်ဆူရှီထဲမှာ ထည့်ရတဲ့ မရိုနိ့စ် က တစ်ခုခုနဲ့ စပ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်မမရယ် အဲ့ဒါလေးစပ်နည်းလေးပြောပြပါဦး….နော်
phyuphyu shwe tun says:
my dear wutyee, you save my life..thanksalot. and welcome more.
So welcome sis!
OMG…can’t believe that i can see lots what ever i want to cook at home now :)) thanks alot
You are so welcome sis! 🙂
sorry ဒီနှစ် သင်္ကြန် ထမင်း အမှီ မတင်လိုက်နိုင်ဘူး..
အရပ်ထဲမှာက နည်းအမျိုးမျိူးနဲ့ချက်စားနေကြလို့ ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
Ok I will try to post 🙂
Sis …. KFC spicy fried chicken လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါဦးနော် …ကျေးဇူးပါ 🙂
KFC spicy တော့ မဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုး KFC ကြက်ကြော်နည်းကိုတော့ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=2417/ ဒီလင့်မှာေ၇းထားပါတယ်
စားချင်တာတွေ အများကြီးပဲ ကွာ……….
Myo W Oo says:
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ် 😀
အမ တာလပေါ့ ချက်နည်းလေးသွ၇င် တင်ပေးပါ အုံးနော်။စားချင်လွုပါ။ကျေးဇူးနော်
ဟုတ်။ တင်ပေးလိုက်မယ် sis
ဟုတ်ကဲ့ ချက်စားကြည့်ပါ sis 😀
Thee Hnit says:
Teach me how to make ice-cream.
ဟုတ်၊ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးမယ်နော်
အစ်မရေ ပဲကုလားချဉ်ရေဟင်း ဘယ်လိုချက်ရလဲမသိ…..သင်ပေးပါအုံး? စောင့်နေမယ်နော်
ဒီလိုမျိုးဟင်းချက်နည်းတွေရှိတာခင်လေးအတွက်အရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟင်းချက်ရတာအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လွယ်ကူစေတယ်
please reply me, ပဲကုလားချည်ရေဟင်း ဘယ်လိုချက်ရလဲ……လုပ်ပါအုံးအစ်မရေ…….။
ok I will try to post later…
အစ်မရေ အကူညီတခုလောက် ခုအစ်မတင်ထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ ဆိုင်သေးလေးတဆိုင်လောက်ဖွင့်ချင်လို့ ဘယ်ဟင်းတွေကို အဓိကထားရင်ကောင်းမလဲလို့ ညီမကဟင်းချက်တာဝါသနာပါလို့ ပြီးတော့အိမ်စရိတ်လေးလဲ၇ချင်လို့ပါ အစ်မစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ကူညီပါနော် အစ်မတင်တဲ့blog ကိုဖတ်ရတာနဲ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်နေပါပြီ ဖြစ်နိုင်ရင်e-mail မှာreply လုပ်ပေးပါနော်
sis ရေ၊ ၀တ်ရည်က ဟင်းပဲ ချက်တတ်တာ၊ စီးပွားရေးတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး … 🙂
အစ်မဆိုက်ကို အခုမှတွေ့တာဗျာ အသိနောက်ကျလေခြင်း
haa Plz try 🙂
ရိုးရိုးဆီချက်ခေါက်ဆွဲလုပ်နည်းလေးမတွေ့တော့လို့ ရချင်လို့ပါ ညီမရေ ကူညီပါဦးနော်
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း မတင်ရသေးလို့၊ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးမယ်နော်.. 🙂
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် …………
ဟင်းချက် ဝါသနာပါ ပေမယ့် မချက်တော့ စားမကောင်းဘူး ………..
ခုမှ ပဲချက်ပုံ ချက်နည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရတာပါ ………
အမ ဒီထက် မက အောင်မြင်ပါစေ ……..
စေတနာကောင်းတဲ့ အမ ကျန်မာပါစေ ချမ်းသာပါစေနော် ………
စပါဂ်တီ လုပ်နည်း http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=1045/ မှာရေးထားပါတယ်..
ကျေးဇူးပြု ပြီး ဟမ်ဘာဂါ ပြု လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါအုန်းခင် ဗျာ ….
မမကိုဘယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရမှန်မသိတော့ဘူး ကျွန်မကလေထမင်းဟင်းချက်တာဝါသနားပါတယ်ဒါပေမယ်သိပ်တော့မချက်တတ်ဘူးလက်ယာလဲသိပ်မကောင်းဘူးလေး အခုတော့မမတင်ထားတဲ့အတိုင်ချက်ကြည့်တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကကျွန်မကိုလက်မထောင်ပြတယ်မမရဲဝမ်းသားလို့ပြောပြမထိပဲမမရေးးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မမ
၀တ်ရညက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်။ နောက်လည်း ဟင်းချက်နည်းလာအားပေးပါအုန်း.. 🙂
အခုဆိုအရမ်းကိုအဆင်ပြေနေတယ် စာချင်တာလုပ်စာလို့ရနေပြီး အားရင်အားသလို့ မုန်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး
ကို ခဏခဏလုပ်စားဖြစ်နေတယ် အဟီး မ၀တ်ရည်ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ အားလုံးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်နေမိတယ် 😀 🙂
Please help me get the recipe for Tapioca Cake (therku pyin) Tapioca with coconut on the top likeacake. Thanks. I know it’s got to used oven to make it but I don’t know how to make it. Please help.
I will try to post this recipe later 🙂
can you post about Asian coconut jelly ? thanks 🙂
hote kae ပို့ပေးပါ့မယ်…. 😉
Welcome sis… တင်ပေးမယ်နော်.. 🙂
chicken roast and pock chop လုပ်နည်းလေး share ပါအုံးဗျာ
Pork Chop လုပ်နည်း http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=3762/ ရေးပေးထားပါတယ်.. 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ မျှဝေပေးပါ့မယ်… 🙂
HELLO!ာေ တကအပနန က မေန အ့န ဘနျအ ခသသုငညါ ညေါနူ သ် သကမ ချူျောပေ ဘနေူတပျေ့ စေစပ တငအ့ ပသကမ နလနမပအ့ငညါ
oh sorry,I sent my letter again,Ma Wutyee u are the best cooking angel of our friends, family and class.May be always happy with your everything.This is my first email letter, if I make u something wrong I hope u will forgive me,bye bye “our cooking angel”
Thanksalot 😀 Never mind sis.. ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်… 😀
မရေ။ ကျနော်တို့လို ဟင်းခုမှစချက်တဲ့သူတွေအတွက် တအားအဆင်ပြေပါတယ်။ မရေ ငါးသံပုရာပေါင်းလေးနဲ့ ငါးပဲငပိချက်လေးစားချင်လို့ ချက်နည်းလေးတင်ပေးပါအုံး။ 😀 ကျေးကျေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးကျေးပါနော်:D
မမဝတ်ရည် mushroom cream soup လုပ်စားချင်လို့ လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါအုံးနော် ကျေးဇူးပါ 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်… 😀
Ko Nyi Phyo says:
ဥပမာ။ ။ မုံညင်းပေါင်း ကိုက်လန့်ပေါင်း မှိုပေါင်း ဂျူးပေါင်း ငါးပေါင်းလိုဟာမျိုးပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော်…
hsu kabyar says:
ငါးဘတ်မွှေကြော်ချက်နည်းလေး သိချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပါလား ဟင်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မ၀တ်ရည်…
Ok I will try to post this recipe later..
ညီမရေ မမကတော့ရှမ်းချဉ်ဖတ်လုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးနော်ညီမ
I will try to post later.. 🙂
Wutyee Food House ကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
You r so welcome bro:D
Poe Hat says:
I don’t know how to cook the bean soup (Pae Hin Yay) for Indian Style ‘Pae Thote’ (Bean Salad) with Samoasa, beans, puu si nan… etc.,..
To cook the bean soup which is topped up onto the bean salad, I should use the raw bean powder or cooked bean powder (Pae MhoteaSein oraKyat)… please reply me ASAP… sister… Thanks so muchhh
Please also tell me how to cook that bean soup…. thanks
ပဲမှုန့် အကျက်မှုန့် ထည့်သုပ်ရတာပါ… 🙂
Dear lovely ma ma,
မဝတ်ရည် ပဲကြော် ဘယ်လိုကြော်ရမလဲသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူ:တင် ပါ တယ်ရှင့်!
Thanksamillion for your website.You make millions of Oversea Burmese
happy to cook at home and enjoy delicious food.
ဒီဆိုဒ် လေးကြောင့်အများကြီးအဆင်ပြေသွားပြီ။ ကျေးဇူးနော်ညီမလေးရေ…..
အမ အပြင်မှာရောပြန်သင်ပေးတဲ့အတန်း ရှိပါသလား ရှိရင်လိပ်စာလေးနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါနော်
ကျေးဇူးပါနော် sis။ ၀တ်ရည် သင်တန်းတော့ မဖွင့်ထားပါဘူး 🙂
can you please doarecipe for “A Thote Sone”
၀တ်ရည် ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. 😉
လူကြီးတွေနဲ့အဆင်ပြေမယ့် အပေါင်းနဲ့အပြုတ်နည်း လေးတွေ တင်ပေးပါအုံးနော် အစ်မအမေက ဆီကြောက်လို့ညီမရေ….ကျေးဇူးနော်ညီမလေး
​ပျော့လည်းမသွားဘူး ကြွပ်​ကြွပ်​​လေး ဘယ်​လို​ကြော်​
တာလည်း တိဘူး ​ကျေးဇူးပြု၍ ​ဖြေ​ပေးပါ​နော်​
Myo Paing says:
ဟင်းချက်နည်းတွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ် ပို့ပေးပါနော်။ လုပ်စားကြည့်တာလည်း အရမ်း အရသာရှိတာဘဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။
Win Win Htwe says:
How to cook certain food
Objectives – To highlight those problem foods which people can easily become sick on if they are not cooked correctly
– What happens if you cook it wrong
-How to prepare and cook it correctly
တစ်ရက်တစ်ရက် ဟင်းချက်ရင် မ နည်းလေးတွေအတိုင်း
တစ်ခုပီးတစ်ခု မရိုးရအောင်ချက်စားဖြစ်တာ မ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ
ပါဝင်​ပစ္စည်း … ဝက်​ကုန်း​ဘောင်​ ​ကြော်​ရန်​
၁။ ဝက်​သား ၂၅ိ/
၂။ ငရုတ်​ပွ အကြီး ၁ ခု
၃။ ကြက်​သွန်​နီ ၁၀ လုံး
၄။ ကြက်​သွန်​မိတ်​ ၂ မျှင်​
၆။ ငရုတ်​​ကောင်း half tea sp
၇။ ဆား ၂ tea sp
၈။ ဟင်းချိုမှုန့်​ ၁ tea sp
၉။ ဆာ​ကောပါ​ကော ၁ tea sp
၁၀။ ပဲသီး ၃ ​တောင့်​
၁၁။ မုန်​လာပန်း လက်​သီးဆုပ်​ခန့်​
၁၂။ မုန်​လာဥနီ ၁ ​တောင့်​
၁၃။ ပဲငံပြာရည်​ ၃ table sp
၁၄။ ကြာညို့ ( ထန်းဖို ) ၃ table sp
၁၅။ သကြား ၁ tea sp
၁၆။ ဆီ ၈ table sp
၁၇။ ငရုတ်​သီး​ခြောက်​ ၅ ​တောင့်​
Thanks sis.. I will try to post later.. 🙂
Ama yay, nyima lal bel tway loat nee lay thi chin par del ama… England nay dar 8 yrs shi bi bel tway ma sar ya dar… Ta char bel mar ma lal loat nee shar ma ya lo bar ama…
Ingredients tway ko tat naing yin English lo thi chin par del ama… Pyaw pya pay par naw… Thx u so much par ama… 🙂
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးမယ်နော် bro..
Khin Khin Win says:
ညီမလေးနည်းနဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက ရွှေရင်အေး လှုခဲ့သေးတယ်…ညီမလေးကတော့တော်တော် ကုသိုလ်တွေရနေပါပြီ…ထပ်ပြီးတော့ ငါးသလောက်ပေါင်းနည်းလေး တင်ပေးပါဦးညီမလေးရေ…
အမ ပေါင်းရင် အရိုးမနူးဘဲ အသားတွေကြေကုန်လို့ တခါမှ အဆင်မပြေသေးဘူး…ညီမ တင်တာနဲ့ ပေါင်းစားမှာ…အခုချိန်က ငါးသလောက်တွေပေါနေတော့ မြန်မာတွေအကြိုက် ငါးသလောက်ပေါင်းလေး တင်ပေးပါဦးညီမလေးရေ….
Yuzana Ko Ko says:
အမရေ ဟင်းချက်နည်း၊မုန့်လုပ်နည်းလေးတွေအခုလို သိခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဝက်သားဘေကွန်လုပ်နည်းလေးကို အမအချိန်ရရင် တင်ပေးပါဦးနော်။
ဟင်းတွေအရမ်းကောင်းတယ် အမ နောက်ပြီးသီးစုံကုလားဟင်းချက်နည်းလေးတင်ပေးပါလား Sis
ညီမလေးရေ အခေါက်ကင် အသားကင် လုပ်နည်းလေး သိရင် မျှပေးပါဦးနော်
Japan ခေါကျဆှဲပွိုတျ (Ramen)လုပျနညျးလေးသိရငျ သငျပေးပါဦး
Weight Loss Diet လေး စီစဉ်ပါလား။ အမြဲစားနေရတာကြီးက ဆီပြန်တွေဘာတွေဆိုတော့ ဝိတ်ကတက်လာရော။ အခု တစ်ပတ်စာဖြစ်ဖြစ်၊ ရက် ၃၀ စာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ light meal လေးတွေ ဟင်းချိုတို့ အသုပ်တို့ပေါ့။ ဇင်ဆို အခု ဆန်လုံးညိုစားနေတယ်၊ ဟင်းချိုတစ်ခွက်လဲ မပါမဖြစ်ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ကြက်သားလေးသုပ်စား အသီးအရွက် နိုင်းချင်းနဲ့။
ကျန်းလဲမာ အာဟာရလဲဖြစ် ဝိတ်လဲကျ ဟင်းအစီအမံတွေ ရှိရင် ကောင်းမယ် ထင်လို့… 🙂
Thaw Tar Zaw says:
အမ Web Page ကို ဖုန်းထဲမှာ ဖတ်လို့တဲ့ Software APK လေးများရှိလားမသိဘူး ခဗျ ..
notify me of new posts me by emal.
ညီမရေ အပေါ်က linkတွေမှာ ထိုင်းဟင်းတွေထဲက ကြက်တောင်ပံအစာသွတ်ရော၊ ငါးဖယ်ကြော်ရြေ က ဒီ ကိုပဲသွားနေပါတယ်။ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=3096
အမက ငါးဖယ်ကြော်လေး ဖတ်ချင်လို့ နည်းနည်းစစ်ပေးပါဦး။
ဆော်လမွန်ငါးနဲ့တူနာငါးတွေready made ဘယ်မှာရနိုင်လဲ
htoon naing says:
sister i want to know making method of yogurt.can u help?
kyu kyu thin says:
I can see new recepies ,please
အီကြာကွေးအစာသွပ်လုပ်နည်းလေး သိချင်လို့ပါ sis ရေ..အဆင်ပြေရင် ပြောပေးပါနော်.
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် sis.. ^_^
king boy lay says:
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ် bro 😀
U toe toe win says:
i like all of your posts and what ever i want to eat my cook follow your cooking style from your post than i can taste very delicious food.
Thank you so much tha mee and one more thing
i would like to take permission for share some of your posts on my
awaiting for your permission granded.
sorry for can’t type this kind of myanmar font.
i knew zawgyi only.
Please share U Toe Toe Win!!! THanksalot 😀
thanks tha mee
ဟင်းချက်​နည်း​တွေအများကြီးသိရလို့​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ 🙂 🙂
so welcome par 🙂
Hla Myo Than says:
Thanksama. I liked your all curry. Please upload the post for another curry.
I will post more recipe! Thanks 😀
အော်ကွေ့ကြည် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါ thanks sis
၀က်အချင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီ မန်းကျည်းရည်နဲ့ ဆေးပေးရင်ရပါတယ် 🙂
အမေwebsite ကို ခုမှကြည့်ဖူး အရမ်းစုံတာပဲနော် အမ ငါးအသားလိပ်ကြော်နည်းလေးပြောပြပေးပါလားနော်
ယူနန်စတိုင်စားစရာ ထမင်းခေါက်ဆွဲလေး ရေးပေးပါဦး
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည် ကြိုးစားပြီ ရေးပေးပါ့မယ်.. 🙂
မုန့်ဖုတ်နည်းလေးတွေပါ အချိန်ရရင် တင်ပေးပါဦး နော်။ကျွန်တော်က အချက်အပြုတ် ဝါသနာပါတော့ အချိန်ရတာနဲ့ မဝတ်ရည်ရဲ့ စာမျက်နှာကိုရှာပြီး ချက်တော့တာပဲ။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် အရမ်းလေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ် မဝတ်ရည် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည် ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော် bro 😉
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒါက မွန်ကြက်သောက်ဆမ်း ချက်နည်းပါ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=6857/
Please, I want to know the procedure to make shan Pae Pouk. Thanks.
Can I know how to make ba la chaung kyaw?
ဟင်းချက်​နည်း​တွေက လွယ်​ကူ အသုံးတည့်​လို့ ​ကျေးဇူးပါ မမ။
Mama yay, ခေါက်ဆွဲသုပ်နည်းလေးပြောပြပါအုံး 🙂
မမwutyee ညီမလေးကို ဆယ်ထပ်ကျောက်ကျောလုပ်နည်းနဲ့တခြားကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေး ပို့ပေးပါနော်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မမ 🙂
Thin Wout Yee says:
Thank you so much for sharing knowledge. I wish you can do more.
may zon says:
မမရေ.. အမဲသားခေါက်ဆွဲပြုတ် လုပ်နည်းလေး သိချင်လို့ပါ. ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး စားချင်တာပါ. ပြောပြပေးပါနော်
အမဲလုံးခေါက်ဆွဲ ကိုပြောတာပါ မမ. ပြောပေးပါနော်
ငါးကြင်းစတူး ချက်​နည်း သိချင်​လို့ပါ ခဗျာ
ဝက်သားထုတ်တိုးနဲ့ အရသာသာတူတဲ့ ဖာကူသေး ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ့လား အမ
ထမင်း အီကြာကွေး နဲ့ တွဲစားရင်း အလွန်ကောင်းပါတယ်
မသိသေးတာတွေသိရလို့ ကျေးဇူးပါ ညီမ
မ ရေ … အရွက်သုပ်လေ အနောက်တိုင်းစတိုင်လ် အာ့လုပ်နည်းလေး သိချင်တယ် . မရိုနိစ် နဲ့သုပ်တာလား မသိဘူး.. ပြီးတော့ သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ ဟင်းလေး ပါ ပြောပြပေးနော်။
ဟင်းအသစ်တင်တိုင်းဘယ်လိုသိရမလဲပြောပါအုံး Facebookတော့ သုံးပါတယ်
Add ပေးပါလား LaYake @ မျှော်နေမယ်နော်အစ်မ
May Caan Lynn says:
ငါးသံပုရာချက်နည်းရယ် ၊ ငါးချိုချဉ် ချက်နည်းလေးပြောပြဘာလား
I would like to know about Hotpot.Thank alot.
အမရာ စိုးမိုး says:
ဘီယာဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ ကြက်ခြေထောက်ပင်စိမ်းချဉ်စပ် အရည် လုပ်နည်းလေး သိချင်လို့ပါ
လေးစားပါသော အစ်မဝတ်ရည် ခင်ဗျ
ကျွန်တော်အစ်မကို အကူညီနဲ့အကြံလေးတောင်းချင်လို့ပါ အဲ့ဒါက ၁၁့၃့၂၀၁၆ ရက်နေ့ကျရင်ရုရှားနိင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရုရှားအယောက် ၃၅ ယောက်လောက်ကို အုန်းနို့ကောင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးချင်လို့ပါ အဲ့ဒါ ကျွန်တော့အနေနဲ့ပဲမှုန့်ဘယ်လောက် ကီလိုနဲ့ အုန်းနိ့ရည်ဘယ်ျလာက်ရယ် ကြက်သားဘယ်လောက်သား လိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ အစ်မ ကူညီပါဦးခင်ဗျ အစ်မဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အမြန်လေးအကြောင်းပြန်စေချင်ပါတယ် နီးမှကပ်ပြီးပူဆာတာမဟုတ်ပါဘူး အခုမှ အစ်မရဲ့ WEB ကိုသိလို့ပါ
chan nyein chan says:
မဝတ်ရီကျန်တော်က ဟင်းချက်ဝါသနာပါပါတယ် အမwbsထဲအခုမှဝင်ကြည့်ဖြစ်တာပါ မဝတ်ရီကိုအရမ်းအရမ်းကိုလေးစားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအမလိုလူမျိုးရှိတာကျန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ် တကယ်ပါရမီရှင်ပါဘဲ အမသိသမျှကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးတယ့်အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဝတ်ရီ ဘဝမှာနေ့ရက်တွေတိုင်း ချိုမြိန်သောနေ့လေးတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေအမ
kyi pyar san says:
မ၀တ်ရည်ရေ ဟင်းချက်နည်းများစွာ တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေဇူးပါနော်။
Lay Zaw says:
ကျွန်တော်မှာ ” မြန်မာ့ဟင်း ချက်နည်းပြုတ်နည်း”ဆိုပြီး
Page လေးတစ်ခု လုပ်ထားပါတယ် ..
မေးမြန်းလာတဲ့ ကျွန်တော်မချက်တတ်တဲ့ ဟင်းလျာတွေကို မဝတ်ရည် ဆီမှ မူရင်းအတိုင်း ကူးယူ ခရတ်တစ်ပေး(Link)ပါပေးပြီး
скачать игру гта мод трансформеры через торрент
http://webmail.ysljdj.com/redir.php?http://pmr24.ru/user/Autobots_ire/ трансформеры3тёмная сторона луны актеры игру
Его в для себя безвыездно устраивало.
Финансовый гороскоп Июль порадует Рыб массой приятных сюрпризов, и первым из них может стать предложение о назначении на более оплачиваемую должность.
трансформеры игры 31-я серия
трансформеры3игра на рс скачать бесплатно
игра на пк трансформеры3скачать торрент
, игры лего трансформеры скачать бесплатно
Игра судя по названию продолжает знаменитую серию игр-стратегий вот уже более десяти лет не сходящую с экранов компьютеров и ноутбуков.
для тех кто обладает незаметностью – кидать ловушку можно не теряя невидимость!..
Там же на форумах можно выложить сейв с непроходимой миссией и попросить помощи, на крупных сайтах, как правило, помогают.
Люди реально покупают игры!
2015 в 18 03 друг купил в стиме по багу за 20 рублей и подарил3лайк!
игра роботы трансформеры для детей4лет
Так же гороскопы не советуют откладывать на потом решение проблем, тем более что апрель к вам очень благосклонен.
Может есть какой-то секрет как перестрелять преследующих копов и уйти от погони или это только со временем, с доступностью погонять на танке и с более крутым оружием?
прохождение игры трансформеры по сети
оптимус прайм картинки грузовиков
Hi admin, do you monetize your blog ? There is easy way to earn extra money every day, just search
အမြဲတမ်း ချက်နည်းလေးတွေကိုစေတနာထည့်ပြီးပြောပေးတဲ့ စစ်ရေ…
NATSHIN NAUNG says:
ကျွန်တော် နတ်သျှင်နောင်ပါ။လန်ဒန်မြို့။အဂ်လန်။ယူကေကပါ။ဒီယူကေမျာနေတာ၁၈ကျော်ပါပြိ။ယခင်လည်းသဘေ်ာအ၇ာရှိဘ၀(RADIO OFFICER/PURSER)ဆက်သါယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ေ၇းအရာရျိဘ၀နဲ့တကမ္ဘာလုံး၁၅နစ်နိးပါ။လူပ်ကိုင်နိုင်ငံတကာေ၇ာက်ခြ့ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတေါမယ်မြန်မာပါးစပ်နဲ့အရသာမတွေ့ဖြစ်ရတာအများကြီးရယ်ပါ။နောက်ကိုယ်လည်းသဘေ်ာမယ်ထမင်းချက်ကြီးကိုစီမံပေးရတာပါ။ခုဒိယူကေမယ်နေတော့ဒီဝပ်ရိအစာစအသောက်ချက်နည်းတေါနြ့ကျိုးစားချက်စားရတာအလွန်အ၇သာကအစစားကောင်းပါတယ်။ချက်ပြုတ်ရတာကအစအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီယူကေလိုနိုင်ငံကအလွန်ချက်ပြုတ်ရခက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဖရီုဇင်(အအေးခန်းအစာ)တေါဘဲပြန်ဖျော့ညပိရောင်းချကြတာပါ။သူတို့ထုံးစံပါ။သူတို့ဆီမယ်လျှာခွာနာတွေဖြစ်လျှင်အမဲက်ြအကောင်ထောင်ချီသတ်ဖြတ်ပစ်ရတော့။နောက်အသစ်အတွက်မှိအောင်အအေးခန်းကြီးတေါမယ်၃။၄လထားပြိးမျာတသုတ်ပြီးတသုတ်ထုတ်ရောင်းတာပါ။ဒါောကာင်တချို့အစတွေကိုချက်ရတာဝပ်ရည်ချက်နည်းနဲ့ဆိုအလွန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ညေပာပါရစေ။ MR NATSHIN NAUNG.LONDON.UK
😉 I may come back yet again since I bookmarked it. Money andd freedom is the gresatest way to change,
may you be riich and continue to guide others.
please advise how to cook weight loss meal too.
ဟင်းချက်နည်းတွေ email ထဲ ပို့ပေးပါဦးနော်